Ao Kolombia, mitombo ireo hetsika fiaraha-mientana mandritra ny valanaretina maneran-tany COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Iray amin'ireo firenena ahitàna tsy fitoviana be indrindra i Kolombia.
Voadika ny 28 Avrily 2020 13:47 GMT
Ankizy nahazo fanampiana avy aminà vondron'olona mpirotsaka an-tsitrapo tao amin'ny Sekoly Diego Echavarria Misas tao amin'ny manodidina an'i Florencia. Sary nalain'ny mpanoratra, Lully Posada
Taorian'ny fahatongavan'ny valanaretina COVID-19 tao Kolombia sy ny fihibohana manerana ny firenena, nokasaina haharitra hatramin'ny 11 Mey, mandray anjara anatin'ireo hetsika fiaraha-mientana ireo Kolombiana mba hanampy hiaro ireo tena marefo. Amin'izao fotoana anoratana izao, 4.149 ireo tranganà tsimokaretina voamarina ao Kolombia, 804 ireo sitrana ary 196 kosa no maty.
Araka ny hita anatin'ireo tombatombana sasantsasany, iray amin'ireo firenena folo ahitàna tsy fitoviana indrindra ao Kolombia, izay saika ho ny antsasaky ny mponina no miankina amin'ny asa tsy ara-dalàna. Maro no tsy manana trano fonenana na tsy an'asa. Misy mpifindramonina miisa 1,4 tapitrisa avy ao Venezoelà ihany koa iharan'ireo fepetra noraisina hanakanana ny fiparitahan'ny tsimokaretina. Ho fanohanana ireo vondrona ireo, nikarakara hetsika fiaraha-mientana ireo olompirenena, fikambanana tsy miankina sy ireo mpitarika ny governemanta anatin'ireo kaominina maro.
Manao hetsipanentanana sy fanangonana ireo olompirenena manana fahafahana ara-bola mba hanomezana fanampiana an'ireo izay mila izany. Anatin'ity lahatsary manaraka ity izay nalain'ny mpanoratra, afaka mahita ny vondrona mpiara-mientana ao amin'ny sekoly Diego Echavarria Misas ianao, izay ahitàna mpampianatra, mpianatra teo aloha sy amin'izao fotoana, ary ray aman-dreny miaraka manao fanomezana sy mitantana ny fanolorana an'ireo mpikambana anatin'ireo vondrompiarahamonina mahantra ao Medellín.
Misy ihany koa ireo hetsika avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny #TodosParaTodos izao dia hetsika nataon'ny Federasiona Nasionalin'ireo Mpivarotra, izay ahitàna laharana natokana hiantsoana ireo dokotera sy psikology mpirotsaka an-tsitrapo ho fanomezana tohana sy hizaràna ny fahaizany amin'ny vahoaka mila izany mandritra ny fotoan'ny fihibohana.
Mikasa ny hampiray ireo matihanina aminà sehatra maro ny #TodosParaTodos, izay maniry ny hizara maimaimpoana ny fotoany avy any an-tranony mba hanampiana ireo manana ahiahy mombanà olana samy hafa. Ny hevitra amin'izany dia ny hanangana tambajotra fanohanana mandritra ny fihibohana ao Kolombia.#Covid_19
Ny tanànan'i Medellín, renivohitr'i Antioquia, dia namorona fialofana vonjimaika miaraka aminà fitaovana sy fandaminana efa voaray ao anatiny. Any, afaka maka aina ireo fianakaviana iharan'ireo fepetra noraisina noho ny tsimokaretina.
Fialofana vonjimaika ao amin'ny manodidina an'i Florencia. Sary nalain'ny mpanoratra Lully Posada.
Natsangana tao amin'ny faritry ny Ivontoeran’ny Fanatanjahantena sy ny Fialana Voly ao Medellín. Ny iray ao amin'ny faritr'i Belén, ho an'ny olona maherin'ny 18 taona, ary ny iray hafa kosa ao amin'ny faritr'i Florencia, natao ho anà ankohonana 30, manana zaza iray fara-fahakeliny isaky ny ankohonana. Any amin'ireo tanàna Kolombiana hafa, nisy ihany koa ireo fepetra fampitokana-monina nokarakaraina tany anatin'ireo stady sy ivontoerana fanatanjahan-tena samihafa.
Nisy “donatón” -hazakazaka fanaovana fanomezana- nahomby ihany koa nanaovan'ny ben'ny tanànan'i Medellín antso, antsoina hoe #DonatónPorMedellín, hanangonana vola ho an'ireo vahoaka marefo hafa, sy ho fanomezana “ventilateurs” sy fitaovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izay mandray ireo mararin'ny COVID-19.
Ho fanondro goavana io #TeletonPorMedellin nokarakarain'ny @QuinteroCalle io hijerena hoe hatraiza ny fiaraha-mientana mbola asehontsika, ny maro izay mahafantatra momba ny toedraharaha ara-toekarena tena henjana izay ho avy eo araka ny tomban'ireo manampahaizana.
Raha mitohy ireo hetsiky ny governemanta ireo, etsy andaniny kosa anefa dia misy fitarainana sy fiahiahiana ny mety hisian'ny kolikoly eo anivon'ny fanjakana. Ohatra, nahita fandaniam-bola mihoapanana ireo andrimpanjakana toa ny Biraon'ny Mpanaramaso Jeneraly sy ny Biraon'ny Mpapanoa Lalàna, izay mety hidika fa misy fampiasana tsy araka ny tokony ho izy an'ireo loharanom-bahoaka ataon'ireo mpitarika sasany ao amin'ny governemanta ho an'ireo tetikasa mifandraika amin'ireo fanampiana ny toeram-pitsaboana na ireo fanampiana mifandray amin'ny COVID-19. Nisokatra ny fanadihadiana.